Ny fivavahana iraniana dia ireo fivavahana efa nisy hatramin' ny ela talohan' ny nidiran' ny fivavahana silamo tany Iràna Lehibe sy ireo fivavahana nipoitra avy amin' izy ireo na avy amin' ny fampifangaroana azy amin' ny fivavahana vahiny. Ankehitriny dia olom-bitsy no manaraka ireo fivavahana ireo raha mitaha amin' ny fivavahana hafa toy ny kristianisma sy ny silamo. Ireto ny malaza amin' ireo fivavahana ireo: ny zôrôastrisma, ny zervanisma, ny mandeisma, ny fivavahana amin' i Mitra ary ny manikeisma.
Ny finoana sy ny asa ary ny zava-mitranga ara-kolontsaina teo amin' ireo Iraniana tao Iràna tamin' ny Andro Taloha dia lohahevitra sarotra tsorina. Ny Ntaolo iraniana dia vondom-poko ariana sy tsy ariana. Ny Ariana, izay atao hoe Ntaolo iraniana, dia nivavaka tamin' ny zava-misy eo amin' ny zavaboary toy ny masoandro sy ny hazavan' ny masoandro ary ny varatra, nefa afaka niova ho amin' ny fivavahana amin' andriamanitra tokana izy ireo nefa tsy manao ny andriamanitra hafa ho tsy andriamanitra na dia tsy nivavahany aza (henôteisma / mônôlatria). I Zaratostra (na Zôrôastra), ilay mpaminany iraniana fahiny, dia nanavao ny finoana ara-pivavahana iraniana ho henôteisma (misy koa ny milaza hoe mônôteisma).
1 Fivavahana iraniana tamin' ny Andro Taloha
1.1 Ny fivavahan' ny vahoaka prôtô-indô-iraniana
1.2 Ny fivavahan' ny Skitiana
1.6 Ny fivavahana amin' i Mitra
1.10 Ny iazidisma
2 Fivavahana iraniana tamin' ny Andro Antenatenany
2.1 Ny mistika persiana
2.2 Ny koramita
2.3 Ny behafaridiana
2.4 Ny iarsanisma
3 Fivavahana iraniana ankehitriny
3.1 Ny asianisma
3.2 Ny rôsania
3.3 Ny babisma
3.4 Ny bahaisma
Fivavahana iraniana tamin' ny Andro TalohaHanova
Ny fivavahan' ny vahoaka prôtô-indô-iranianaHanova
Ny fivavahan' ny vahoaka nipoiran' ny Indô-iraniana no nivoatra ho amin' ny fivavahan' ny vahoaka iraniana taty aoriana. Io fivavahana io ihany koa no nanako teo amin' ny fivoaran' ireo fivavahana indiana.
Ny fivavahan' ny SkitianaHanova
Ny Skitiana na Skita na Sita dia vondrom-poko indô-eorôpeana tao Eorazia izay mpifindrafindra monina sady miteny amin' ny fiteny iraniana (dia ny fiteny skitiana na firteny sita). Any Azia Afovoany no fiavian' ny Skitiana. Nahatratra ny fara tampon' ny heriny izy ireo teo anelanelan' ny taonjato faha-7 tal. J.K. sy ny fotoana niafaran' ny Andro Taloha, indrindra tao amin' ny faritra anjakan' ny zavamaniry fohy ao Eorazia afovoany, izay faritra midadasika hatrany Okraina ka hatrany Altai, mamakivaky an' i Rosia sy an' i Kazaksatàna ankehitriny.
Ny fivavahan' ny Skitiana no nialoha sady fiavian' ny fivavahana atao hoe oatsdina ankehitriny. Fitambarana fombafomba sy finoana izay nanjaka tao Azia Afovoany sy tao Eorôpa Atsinanana nandritra ny Andro Taloha izany. Nifandray tamin' ny fivavahan' ny Prôtô-indô-iraniana ny fivavahan' ny Skitiana. Taty aoriana dia nisy akony teo amin' ny fivavahana sy ny fedrà slava sy hongariana ary torka izany fivavahana izany. Nisy akony teo amin' ny fomba amam-panaon' ny Iraniana tatsinana sy ny an' ny Ôsetiana koa io fivavahana io.
Ny zôrôastrisma dia fivavahana mônôteista naorin' i Zaratostra (na Zôrôastra na Zôrôastera) tany Persia tany amin' ny taonjato faha-7 tal. J.K. ka i Ahora Mazda (Ahura Mazda) no anaran' ny andriamaniny. Manindry mafy ny fifanoheran' ny herin' ny tsara amin' ny herin' ny ratsy (doalisma) i Zaratostra nefa tsy mitory fisian' andriamanitra roa mifanohitra. Fivavahana efa nisy talohan' ny kristianisma ary ny silamo sady niara-nisy tamin' ny jodaisma tamin' ny fotoan' ny fahababoan' ny Jiosy tany Babilôna ny zôrôastrisma.
Tany Persia tamin' ny andron' ny Akemenida no nipoiran' ny zervanisma (na zorvanisma), avy amin' ny anaran' ny zavatra inoany atao hoe Zorvana na Zervana, ary heverina fa nisy talohan' ny zôrôastrisma izay nahazoany ampahany tamin' ny fampianarany, indrindra ny doalisma. Ny zervanisma tamin'ny vanimpotoan' ny Empira Akemenida, izay manana firehana doalista mônista, izay nitohy tamin' ny andron' ny Empira Sasanida. I Zorvàna dia hevitra fa tsy andriamanitra, foto-javatra tsy voafaritra.
Ny mandeisma dia fivavahana abrahamika, batista (manao batisa), mônôteista ary gnôstika. Fototry ny fampianaran' ny mandeisma ny fifanoheram-poto-javatra roa (doalisma) izay ahitana ny "tontolo ambony" sy ny "tontolo ambany", ny "toeran' ny fahazavana" sy ny "toeran' ny haizina", izay tsy misakana an' Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin' ny famoronana. Izany famoronana izany dia notohizan' ny asa maharitra ataon' Andriamanitra sy ny fanambaràna amin' ny alalan' ny "Iraky ny lanitra". Araka ny lovantsofina mandeana dia i Joany mpanao batisa izany iraka izany sady mpaminany lehibe ho an' izy ireo. Ny Mandeana dia mitsaoka an' i Adama, an' i Abela, an' i Seta, an' i Henôka, an' i Nôa, an' i Sema, an' i Arama ary indrindra an' i Joany mpanao batisa. Niadian-kevitra ny mety ho fifandraisan' ny mandeisma sy ny kristianisma tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-20.
Ny fivavahana amin' i Mitra (Mithra) antsoina hoe mitraisma dia fivavahana misy zava-miafina. Ny mitraisma dia fivavahana izay tokony niseho tamin' ny taonjato faha-2 tal. J.K. tany Persia. Nivavahana tao amin' ny Empira Rômana izy io tamin' ny taonjato voalohany hatramin' ny faha-4 taor. J.K. Na dia izany aza dia mampiady hevitra ny mpikaroka ny fifandraisan' ny fivavahana amin' i Mitra tao Persia sy ny tao amin' ny Empira Rômana.
Ny manikeisma, izay fivavahana naorin' ilay Persiana atao hoe Manỳ (na Manika) tamin' ny taonjato faha-3, dia fivavahana mino ny fifamenoan' ny andriamanitra roa mifanohitra, izay mety nisy akony teo amin' ny mandeisma. Fifangaroan' ny zôrôastrisma sy ny bodisma ary ny kristianisma ny manikeisma (sinkretisma). Nandray zavatra be dia be tamin' ny gnôstisisma ny manikeisma. Ny ivon' ny fampianarany dia ny fizaràny izao rehetra izao ho roa (doalisma), ahitana ny fanjakan' ny Tsara (atao hoe fanjakan' ny Fahazavana) izay anjakan' Andriamanitra, sy ny fanjakan' ny Ratsy (na fanjakan' ny Haizina) izay anjakan' i Satana. Mampianatra ny fisian' ny atao amin' ny teny persiana hoe Pīd ī Wuzurgīh ("Rain' ny Fahalehibeazana") (arameana: Abbā dəRabbūṯā) sady manaja azy amin' ny maha andriamanitry ny fahazavana ambony indrindra azy ny manikeisma.
Ny mazdakisma dia fivavahana gnôstika izay niavaka tamin' ny fanafoanany ny fananan-tsamirery fa nanandratra ny fananana iombonana (mpialoha lalana ny kômonisma), izay niseho tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-5 sy ny fiandohan' ny taonjato faha-6. Nipoitra avy tamin' ny zôrôastrisma ny mazdakisma. Avy amin' ny anaran' ilay mpiaro azy io anarana io, dia i Mazdaka (Mazdak).
Ny iazdanisma dia fivavahana mônôteista efa nisy taloha, manao fanompoam-pivavahana amin' ny anjely (iazdâny), izay narahin' ny Korda talohan' ny niitaran' ny tany fehezin' ny Arabo tamin' ny taonjato faha-7 sy talohan' ny nanovana azy ireo ho Miozolmana. Ny iazdanisma dia mampianatra ny fahaterahan' ny zavamananaina indray miaraka amin' ny fanahin' ny zavamananaina hafa efa maty taloha, sahala amin' ny finoan' ny hindoisma, ary mino ny anjely fito izay miaro an' izao tontolo izao amin' ny devoly na demony fito.
Ny iazidisma, na iezidisma na fivavahana amin' ny anjely fito, dia fivavahana amin' andriamanitra tokana, ao amin' ny fianakaviambe ara-pivavahana iezidy, izay lazain' ireo mpino ao aminy ho nipoitra avy ao Iràna taloha. Heverina ho isan' ny fivavahana abrahamika ny iazidisma.
Fivavahana iraniana tamin' ny Andro AntenatenanyHanova
Ny sasany amin' ny mpitondra fivavahana dia nanao fampianarana mifangarogaro (sinkretisma) ny finoana silamo sy ny fivavahana teo an-toerana toy ny paganisma iraniana, ny zorvanisma, ny manikeisma ary ny zôrôastrianisma.
Ny mistika persianaHanova
Ny vanim-potoana silamo tany am-boalohany dia nahita ny fivoaran' ny mistika persiana, izay fandikana nentim-paharazana ny fisiana sy ny fiainana ary ny fitiavana miaraka amin' ny mônôteisma sofy persiana ho lafiny azo ampiharina. Ity fivoarana ity dia nino ny fahitana mivantana ny fahamarinana ara-panahy (Andriamanitra), amin' ny alàlan' ny fanao mistika mifototra amin' ny fitiavana avy amin' Andriamanitra.
Ny koramita, izay fihetsiketsehana ara-pivavahana sy ara-pôlitika tamin' ny taonjato faha-9 niorina tamin' ny fampianaran' i Sunpadh tamin' ny taonjato faha-8, izay nitory fampianaram-pinoana maka singa avy amin' ny silamo siita sy ny zôrôastrisma. Rehefa teo ambany fitarihan' i Babak Khorramdin ilay fihetsiketsehana dia nikatsaka ny hizarana indray ny harem-pirenena sy hanafoana ny fivavahana silamo.
Ny behafaridiana dia hetsika ara-pivavahana tamin' ny taonjato faha-8 nanodidina ny mpaminany Behafarid. Na dia heverina ho niorim-paka tao amin' ny zôrôastrisma aza ilay hetsika, dia novonoina ho faty noho ny fiampangana (nataon' ny Zôrôastriana) i Behafarid sy ny mpanara-dia azy fa manimba ny zôrôastrisma sy ny silamo.
Fivavahana iraniana ankehitrinyHanova
Ny asianisma na oatsdina dia paganisma môderina mifototra amin' ny fivavahana ara-poko nentin-drazana an' ny Ôsetiana, taranaky ny Skitiana (na Sita), izay heverina ho fitohizan' ny fivavahana skitiana fahiny. Nanomboka novelomina tamin' ny fomba voasaina sy voalamina izy io tamin' ny taona 1980. Ny "Tantaran' ireo Nart" no ivon' ny fivavahana, ary ny mpomba ny hetsika dia naka mpanadihady lahatsoratra ara-teôlôjia avy amin' izy ireo.
Ny fihetsiketsehana rôsania dia fampianarana mônôteista, milenarista, tao amin' ny sofisma nataon' i Bayazid Ansari na Pir Roshan, tamin' ny tapaky ny taonjato faha-16 ary nipoitra teo anivon' ireo foko afghàna. Niaro ny fiitsipi-pitondran-tena sy foto-kevitra mampitovy zo izy. Nanakoako teo amin' ireo foko afridy, ôrakzay, kalily, môhmandy ary bangasy any Afganistàna ny fampianarany.
Ny babisma dia fihetseketsehana ara-pivavahana mpitondra fanitsiana sy milenarista naorin' ny mpivarotra iray atao hoe Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī (1819-1850) tao amin' ny tanànan' i Shiraz ao Iràna tamin' ny 23 Mey 1844. Firehana ara-pivavahana nipoitra avy amin' ny sampana siita, izay manao fampianarana mifanohitra amin' ny fivavahana silamo be mpanaraka ny babisma. Amin' ny fanambaràn' ny Bāb dia fisehoan' Andriamanitra avokoa ny mpaminany rehetra ary izy tenany dia mitovy amin' i Mohamady. Faniratsirana ny fivavahana silamo izany amin' ny Miozolmana. Ny mpitondra fivavahana siita niaraka amin' ny governemanta persana dia nanenjika amin-kabibiana ny mpanaraka ny finoana baby an' arivony maro. Tsy misy afa-tsy vitsivitsy ankehitriny sisa amin' ny mpianatr' i Bāb. Ao Iràna sy ao Ozbekistàna no tena ahitana azy ireo nefa sarotra ny mahalala ny tena isany, satria manafina ny tena fivavahany izy ireo.
Ny bahaisma dia finoana abrahamika naorin' i Baha'u'llah (teraka tao amin' ny faritanin' i Mazanderan any Iràna tamin' ny taona 1817) tamin' ny taona 1863. Fivavahana mônôteista ny finoana bahay. Mandala ny maha tokana an' Andriamanitra ny Bahay. Any Haifa any Israely no foibe fara tampony. Manaiky ny maha tena izy ny ankamaroan' ny fivavahana manerana izao tontolo izao ny Bahay, ka ny mpanorina ireo fivavahana ireo na ny olona manan-danja indrindra tao amin' ireo fivavahana ireo dia heveriny ho "fisehoan' Andriamanitra": i Mosesy (na Môizy), i Jesoa (na Jesosy), i Mohamady, i Krishna, i Zaratostra (na Zôrôastra) ary i Bodà (Buddha).
Vahoaka sy faritra ary fiteny
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_iraniana&oldid=1043183"
Dernière modification le 22 Janoary 2022, à 12:41
Voaova farany tamin'ny 22 Janoary 2022 amin'ny 12:41 ity pejy ity.